Jibis ay ku dhegan yihiin in ka badan 500 oo shilin oo lagu badbaadiyay Australia | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Jibis ay ku dhegan yihiin in ka badan 500 oo shilin oo...
“Dhab ahaantii, masku xaalad culus ayuu ku sugnaa,” ayuu yiri.
“Waa ay iska caddeyn in masku uu aad u xanuunsanayay oo laga soo tallaabay hab difaaceedkiisii,” ayuu yiri bare sare Fry.
“Waxaan ka shakisanahay in maskaasi uu badbaadi lahaa haddaanan halkaa laga soo bixin oo aanan la daweyn.”
Mr Harrison ayaa goor dambe waxa uu sheegay in maska Nike la yiraahdo uu caabuq qaaday, walow haatan ay xaaladdiisu wanaagsan tahay”.
Previous articleCanada Oo Hal Malyan Oo Qaxooti Ah U Oggolaanaysa Dalkeeda
Next articleXog:UK oo ergey cusub u soo magacowday Somaliland & Magaciisa+ Cidu bedeli doono & Fadhigiisa halkuu noqon doono